Brucite no fitrandrahana mineraly magnesium hydroxide - horonan-tsary
Brucite no fitrandrahana mineraly magnesium hydroxide, miaraka amin'ny alikaola Mg (OH) 2. Izy io dia vokatra fanovana mahazatra amin'ny periclase amin'ny marbra, mineraly ambany be amin'ny hidro-hydrothermal amin'ny mineraly metamorphosed sy klavista klasika, ary niforona nandritra ny fanodikodinana ny dunites. Ny brucite dia matetika hita miaraka amin'ny bibilava, kalkita, aragonite, dolomita, magnesite, hydromagnesite, artiva, talc ary chrysotile.
Izy io dia mandrafitra ny rafitra CdI2 toy ny lay misy ny hidrogen eo anelanelan'ireo takelaka.
I Brucite no nofaritana voalohany tamin'ny 1824 ary nantsoina ho mpikaroka, mpitrandraka Amerikana, Archibald Bruce (1777-1818). Karazana brucite misy fibra mahery antsoina hoe nemalite. Mitranga amin'ny fibra na laths, matetika elongated, fa torolàlana kosa indraindray.
Toerana iray malaza any Etazonia dia Wood's Chrome mine, Cedar Hill Quarry, Lancaster County, Pennsylvania. Brucite mavo, fotsy sy manga miaraka amin'ny fahazarana botryoidal iray dia hita tany amin'ny Distrikan'i Qila Saifullah any Baluchistan, Pakistan. Ary avy eo, tamin'ny fahitana taty aoriana dia nisy koa ny Brucite tao amin'ny Bela Ophiolite any Wadh, Distrika Khuzdar, Faritany Baluchistan, Pakistan. Brucite koa dia nitranga avy any Afrika Atsimo, Italia, Russia, Canada, ary ny toerana hafa misy ihany koa fa ny zavatra tena hita indrindra dia ohatra amerikana, Rosiana ary Pakistani.
Ny dikan'ny brucite, ny hery, ny tombontsoa, ​​ny fanasitranana ary ny fananana metafizika
Brucite dia hanampy anao amin'ny fomba marobe:
Fantatra fa manana fananana fanasitranana tena tsara ao anatin'izany ny fanampiana amin'ny fifehezana ny mari-pana amin'ny vatana.
Ity mineraly ity dia fantatra fa miteraka angovo izay mety manampy ny vatana hiatrika ny ranom-boasary mahery loatra.
Mety hanampy olana amin'ny tsinaina izy io ary manampy amin'ny fihenan'ny fihenan-drivotra mandeha.
Fantatra koa fa manampy amin'ny famoretana sy hanampiana ireo olana ao anaty hozatra amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny famelana sy ny fikorontanana.
Brucite dia malaza ihany koa hanohana ny fanasitranana ny taolana tapaka ary fantatra fa mampihena ny neuralgia sy fanaintainana miaraka.
Amin'ny alàlan'ny hetsika ataony hanokafana ny satroboninahitra satroboninahitra dia voalaza fa hampihena ny fanaintainan'ny aretin-doha sy migraine. Ampiasao amin'ny satroboninahitra satroboninahitra mba hampiakarana ny fanahinao, hanatsara ny fisainanao ary hanatsara ny toe-tsainao.
Brucite dia misy vovoka mahasoa izay mety hanampy anao hamantatra raha tena mahasoa anao ilay toe-javatra misy anao.
Ho an'ireo manana fifandraisana manokana izay tsapanao fa tsy mety aminao intsony ary mety ho tonga ny farany, ny herin'ity vato ity dia mety hanampy anao handray fanapahan-kevitra momba ny hetsika izay tokony horaisinao.
Brucite, avy any Pakistan
Izahay dia manao firavaka vita brucite ho toy ny peratra, rojo, kavina, kavina sy pendant.
Mividiana brucite voajanahary ao amin'ny magazay